🥇 Litecoin အွန်လိုင်း 2022 ဇူလိုင်လတွင် ဝယ်နည်း | ကုန်သွယ်မှုလမ်းညွှန် ၂ ခုကို အပြည့်အစုံ လေ့လာပါ။
၂၀၂၁ Litecoin ကိုဘယ်လို ၀ ယ်မလဲ
ပထမဆုံး altcoin ကို cryptocurrency လောကသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်မှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ခဲ့ပြီ၊ Litecoin သည်လူသိအများဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင် cryptocurrency စျေးကွက်တွင်အပူဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများထဲမှတစ်ခုကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ကိုလေ့လာလိုလျှင်ထိုနေရာတွင်နေပါ။
ဤပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် Litecoin ကိုဘယ်လို ၀ ယ်မလဲ အစမှအဆုံး ကျွန်ုပ်တို့လည်းအသုံးအများဆုံး crypto နည်းဗျူဟာအချို့ကိုဖော်ထုတ်ပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ရှစ်ထုပ်ကို အခုပဲ သွားကြည့်ပါ။
၁၀ မိနစ်အတွင်း Litecoin ၀ ယ်နည်း - Quickfire လမ်းညွှန်
Litecoin ကိုအွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူရန်သင်သည်ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအကြွေစေ့ကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ပွဲစားနှင့်ပူးပေါင်းရန်လိုလိမ့်မည်။ သင်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းကိုသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်သင် Litecoin ကိုလွယ်ကူစွာ ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
သင်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အိမ်စာမလုပ်ရသေးလျှင်စိတ်မပူပါနဲ့၊ ထိပ်တန်း ၄ ပလက်ဖောင်းများကိုမကြာမီပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
ယခု Litecoin ကို ၀ ယ်ရန်ရှာဖွေနေသူများအတွက်၊ အချိန်အတွက်ဖိနှိပ်ခံရပါကအောက်ပါအမြန်မီးကစားနည်းကိုကြည့်ပါ။
အဆင့် 1: ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဘဲမင်းပွဲစားနဲ့ပူးပေါင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Capital.com ကိုသန်းပေါင်းများစွာကသုံးပြီး Litecoin ကို ၀ ယ်ဖို့မင်းကော်မရှင်မပေးရဘူး။
အဆင့် 2: အသုံးပြုသူအမည်နှင့်အမှတ်တရစကားဝှက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ
အဆင့် 3: KYC အရ၊ ယခုသင် ID နှင့်လိပ်စာအထောက်အထားအချို့ကိုတောင်းလိမ့်မည်။ လူအများစုသည်၎င်းတို့၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့်မကြာသေးမီကဘဏ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကိုသုံးကြသည်။
အဆင့် 4: 'ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ' ကိုနှိပ်ပါ၊ သင်ရနိုင်သောငွေပမာဏကိုထည့်ပါ
အဆင့် 5: Litecoin ကိုရှာပါ၊ သင် ၀ ယ်လိုသောပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ (အနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာ) နှင့်မှာယူပါ။
မင်းကော်မရှင်မှအခမဲ့ Litecoin ၀ ယ်လိုက်ပြီ။
ယုံကြည်ရသော Litecoin ပွဲစားကိုရွေးပါ
အွန်လိုင်းပွဲစားများသည် cryptocurrency စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်းမှတဆင့် Litecoin ၀ ယ်ရန်လိုသည်။
Litecoin ကို ၀ ယ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုထက်ပိုရှိသည်၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုနာရီပေါင်းများစွာသုတေသနလုပ်ပြီးဒီဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကမ်းလှမ်းတဲ့ထိပ်တန်း ၄ ပလက်ဖောင်းတွေကိုပြန်သုံးသပ်ခဲ့တယ်။
သိသာထင်ရှားသည်၊ ငါတို့သည်လည်း CFD ပွဲစားများကိုထည့်သွင်းထားသည် - ၎င်းသည်သင့်အား LTC ဒင်္ဂါးပြားများပေါ်တွင်တိုတိုသွားစေနိုင်သောသြဇာကိုအသုံးချသည်။
၁။ AvaTrade - CFD ပွဲစားနှင့် Techincal ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိရိယာများ
AvaTrade သည်သင့်အား Litecoin ကိုသုံးခွင့်ပေးနိုင်သောကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်အခြားကော်မရှင်မပါသော CFD ပွဲစားဖြစ်သည်။ အခြား cryptocurrency CFDs တစ်ဒါဇင်ကျော်အပြင် indices, forex, ETFs, stocks နှင့် bonds တစ်လျှောက်တွင်စျေးကွက် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည် Litecoin CFDs တွင်ပုံမှန်ပြန့်နှံ့မှုကိုစျေး ၀.၆% ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ထို့ပြင်၊ ဤကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းသည်ခွင့်ပြုထားသော Litecoin အရောင်းအ ၀ ယ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပေးသည်။ ဒီဆိုက်ကဥရောပဖောက်သည်များအတွက် ၁: ၂ နှင့်အီးယူမဟုတ်သောကုန်သည်များအတွက် ၁:၂၅ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်ရှယ်ယာ ၁ ဒေါ်လာတိုင်းကို ၂၅ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ဤပလက်ဖောင်း၏တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ AvaTrade သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ၆ ခုတွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ဥရောပ၊ သြစတေးလျ၊ ဂျပန်နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
Litecoin ကုန်သည်များအားလုံးသည်ငုပ်လျှိုးရန်မလိုပါ။ ထို့ကြောင့် AvaTrade သည်အမျိုးမျိုးသောကုန်သွယ်မှုဗွီဒီယိုများ၊ အညွှန်းများနှင့်နည်းဗျူဟာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောပညာပေးစင်တာတစ်ခုကိုပေးသည်။ crypto အော်ဒါအမျိုးအစားများနှင့်အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်မှုနည်းစနစ်များအကြောင်းသင်ခန်းစာများကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထို့ပြင်မင်းရဲ့အကောင့်ကို MetaTrader4 အထိချိတ်ပြီးအဲဒီမှာကုန်သွယ်ရေးကိရိယာမျိုးစုံကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
တကယ့်ပိုက်ဆံနဲ့အသက်မရှင်ခင်အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုစမ်းကြည့်ချင်ကောင်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေတစ်ရာကိုမစွန့်ဘဲ Litecoin CFDs များကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်စေသည်။ ၎င်းအစား၊ သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ စက္ကူကုန်သွယ်မှူကိုသုံးလိမ့်မည်။ လက်ခံငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအရ၊ အသုံးအများဆုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်အဓိကခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များနှင့်ငွေလွှဲခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အချို့လူများသည် Skrill, Boleto နှင့် Neteller ကဲ့သို့ e-wallets များကို သုံး၍ ငွေသွင်းနိုင်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ AvaTrade မှာ Litecoin CFDs ၀ ယ်ဖို့အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်ကဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲ။
Litecoin ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ မှရောင်းဝယ်ပါ
စည်းမျဉ်းခံအဖွဲ့အစည်း ၆ ခုဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်
Litecoin CFD များသည် ၀% ကော်မရှင်နှင့်လာသည်
2. Capital.com - Newbie Friendly Litecoin CFD ပလက်ဖောင်း - ဒေါ်လာ ၂၀ သာအပ်နှံပါ
Capital.com သည်ကုန်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှစ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤ CFD ပွဲစားသည်ကုန်စည်များ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ နိုင်ငံခြားငွေများ၊ ရှယ်ယာများနှင့် Litecoin ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများအပါအ ၀ င်စျေးကွက် ၃၀၀၀ ကျော်၌ကမ်းလှမ်းသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ CFDs တွေကိုရောင်းဝယ်တဲ့အခါမင်းကအရင်းခံပစ္စည်းကို ၀ ယ်တာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော်သင်သည် Litecoin ကိုတိုတိုလေးလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်တန်ဖိုးမြင့်တက်ခြင်းမှသာအကျိုးခံစားနိုင်သောစတော့များကဲ့သို့ရိုးရာပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်အခါနှင့်မတူပါ။ ဤ CFD ပွဲစားသည်သင့်အားကော်မရှင်ကြေးတစ်ရာခိုင်နှုန်းမပေးဘဲ Litecoin ကိုရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာစဉ်းစားရန်ကျန်သည့်အရာသည်ပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Capital.com တွင် spreads များသည်တင်းကျပ်သည်ကိုငါတို့တွေ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် USD နှင့် Litecoin သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၀.၄%၊ LTC/EUR ပျမ်းမျှ ၀.၈%နှင့် crypto-crypto pair LTC/BTC သည် ၂.၉၉%ခန့်ရှိသည်။
ဤပွဲစားသည် လိုလားသောကုန်သည်များအတွက် Litecoin တွင် 1:10 သြဇာအာဏာနှင့် လက်လီဖောက်သည်များအတွက် 1:2 အထိ ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Capital.com ကို FCA၊ CySEC၊ ASIC နှင့် NBRB မှ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ အတည်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် Litecoin အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိပြီး ဖောက်သည်ဂရုစိုက်မှုအဆင့်ကို သင်မျှော်လင့်နိုင်သည် - သင်၏ငွေကို ပွဲစား၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးမှ သီးခြားထားရှိခြင်းပါ၀င်သည်။
ထို့ပြင်သင်ကအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဦး စားပေးနေဆဲဆိုရင်မင်းကမ်းလှမ်းမှုအမျိုးမျိုးမှာကုန်သွယ်ရေးကိရိယာတွေကိုထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် webinars၊ ငွေကြေးသတင်းနှင့်စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်အမျိုးမျိုးတို့ပါ ၀ င်သည်။ Litecoin CFDs ရောင်းဝယ်ခြင်းတွင်အလေ့အကျင့်တစ်ခုရလိုပါသလား။ Capital.com သည် ၀ ယ်သူအားလုံးကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ virtual account ကိုပေးသည်။
၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် crypto ဘတ်ဂျက်သို့မကျဘဲမဟာဗျူဟာချရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ သင်၏ Litecoin ကုန်သွယ်မှုစွန့်စားမှုကိုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀ သွင်းခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုအကြွေး/ဒက်ဘစ်ကတ်များ၊ ရိုးရာဘဏ်ငွေလွှဲများနှင့် e-wallet တို့မှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Litecoin CFDs ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်မှအခမဲ့ကုန်သွယ်ပါ
$ 20 မှစတင်ပါ
သင်၏ Litecoin မဟာဗျူဟာကိုသုံးသပ်ပါ
နည်းဗျူဟာများကိုအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောနှင့်ကျွမ်းကျင်သော Litecoin ၀ ယ်သူနှစ် ဦး စလုံးကသုံးသည်။ နောက်ဆုံးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိခြင်းကမင်းရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကိုပိုကောင်းအောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ကူညီပေးတယ်။
Litecoin ကို ၀ ယ ်၍ ကိုင်ထားပါ
သင် Litecoin ကို ၀ ယ်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သင်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားများ ၀ ယ် ယူ၍ ၎င်းတို့ကိုမရောင်းမီလနှင့်နှစ်များအထိထိန်းသိမ်းထားသည်။
မင်းဘာလို့မေးတာလဲ။ အချို့လူများကဤအထူးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွေ့အကြုံများတွင်ရေတိုစျေးအတက်အကျများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မပူကြပါ။ ထို့ကြောင့်၊ သင် Litecoin ကိုစျေးသက်သက်သာသာနှင့် ၀ ယ်ပြီးနောက်သင်ကန ဦး ပေးချေခဲ့သည့်ထက်များစွာပိုသောနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းကိုရောင်းရန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်ရှင်းလင်းချက်အတွက် Litecoin ၀ ယ်ကိုင်ခြင်းနည်းဗျူဟာ၏လက်တွေ့ဥပမာကိုကြည့်ပါ။
လက်ရှိစျေးနှုန်းများပေါ် မူတည်၍ Litecoin သည်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုသင်ထင်သည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တစ် ဦး $ 300 နေရာ ဝယ်ခြင်း သင်၏ online broker နှင့်မှာယူပါ
မင်းရဲ့ LTC ဒင်္ဂါးပြားတွေကို ၉ လကျော်လောက်သိုလှောင်ထားခဲ့တယ်
စျေးနှုန်းကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်စစ်ဆေးသည့်အခါ Litecoin သည်သင်မှာယူမှုအစပိုင်းတွင်ထက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားနေသည်ကိုသင်တွေ့ရသည်
တစ်နေရာကိုနေရာချခြင်းအားဖြင့်သင်အခွင့်အလမ်းနှင့်ငွေသားကိုအလျင်အမြန်ဖမ်းယူလိုက်သည် ရောင်းချ သင်၏ Litecoin ၀ ယ်ယူမှုကိုမှာယူပါ
မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၃၀၀ ၀ ယ်ယူမှုကနေမင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒင်္ဂါးပြားတွေ (ဒေါ်လာ ၃၀၀ x ၂၁%) ကိုကိုင်ပြီးအမြတ် ၆၃ ဒေါ်လာရခဲ့တယ်။
အရေးကြီးတာကမင်း ၀ ယ်ယူမယ့်နေရာကိုမင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ ရနိုင်သော crypto ပိုက်ဆံအိတ်အက်ပလီကေးရှင်းရာပေါင်းများစွာကို ဖြတ်၍ ၎င်းထဲမှတစ်ခုကို download လုပ်ပါ။ ပြဿနာကမင်းကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကို encrypt လုပ်ပြီးမင်းကိုယ်မင်းလုံခြုံအောင်တာဝန်ယူဖို့လိုတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အထက်ပါဥပမာသည်သင်၏ LTC တိုကင်များကိုသင်ရွေးထားသောပွဲစားတွင်သိုလှောင်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ၎င်းသည် cryptocurrencies ကိုဂရုစိုက်ရန်အလုံခြုံဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် eToro မှာမင်းရဲ့ Litecoin ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာအပိုကြေးမယူဘဲ ၀ ယ်နိုင်တယ်၊ ရောင်းဝယ်နိုင်တယ်၊ သိုလှောင်နိုင်တယ်။
သင်ရွေးချယ်ပါက ကုန်သွယ် Litecoin၊ ဤအရာသည်သင်၏ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော CFDs (ကွဲပြားမှုများအတွက်စာချုပ်များ) မှတဆင့်အောင်မြင်လိမ့်မည် ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ရသောပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များတစ်လျှောက် CFD များရောင်းဝယ်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အတွေ့အကြုံအဆင့်အားလုံးရှိကုန်သည်များအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဆင်ပြေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ပါဝင်ဖူးပါက Forex ကုန်သွယ်ငွေကြေးများကိုအသေးအဖွဲ၊ အဓိကနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများဖြင့်စုထားသည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။
cryptocurrency ရောင်းဝယ်မှုတွင်အတွဲများအားများသောအားဖြင့် crypto-crypto (သို့) crypto-fiat အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ LTC/ETH ကဲ့သို့ရောင်းဝယ်သော Ethereum ကဲ့သို့ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် Litecoin ရောင်းဝယ်သူဟောင်းသည်သင်တွေ့လိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်သည် Ripple နှင့် Litecoin (သို့) Litecoin ဖြစ်သော LTC/XRP ကဲ့သို့သောတစ်စုံကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
Litecoin ကိုရောင်းဝယ်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာယူရိုသို့မဟုတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကဲ့သို့သောငွေကြေးတစ်ခုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် LTC/EUR ကိုမြင်လျှင်၊ သင် Litecoin ကိုယူရိုတန်ဖိုးနှင့်ကုန်သွယ်နေသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ CFD များသည်အရင်းခံလုံခြုံရေး၏စျေးနှုန်းကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် LTC/AUD ကိုဒေါ်လာ ၂၆၂ ဖြင့်ရောင်းချလျှင် CFD သည်လည်း ၂၆၂ ဒေါ်လာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်သင်အမှန်တကယ်မလိုဘဲ Litecoin ၏တန်ဖိုးကို ဦး တည်ချက်ဖြင့်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် ပိုင်ဆိုင် က။
သင်ဒေါ်လာ ၂၆၂ ဖြင့် CFD မှတဆင့် Litecoin ကိုသြစတေးလျဒေါ်လာနှင့်ရောင်းဝယ်လိုသည်
ဒီစျေးကွက်ကိုခဏလောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီစုံတွဲဟာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမကြာခင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ် ကျ တန်ဖိုး
ဤစိတ်နှင့်သင်သွားလော့ တိုတောင်းသော LTC/AUD တွင်ဒေါ်လာ ၈၀၀ ဖြင့် ရောင်းချ အမိန့်
သေချာတာပေါ့၊ ၂ ရက်အကြာမှာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းကဒေါ်လာ ၂၂၀ ကိုကိုးကားတယ်၊ ဒါက ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းဈေးကျဆင်းသွားတာကိုပြနေတယ်
ထို့ကြောင့်သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်သည်ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးသင်ဖန်တီးခဲ့သည် ဝယ်ခြင်း မင်းရဲ့ဒေါ်လာ ၁၂၈ အမြတ် (၈၀၀ x ၁၆%) ကိုငွေထုတ်ဖို့
crypto CFDs နှင့်ဆိုင်သောအရာသည်သင်မည်သည့် ဦး တည်ချက်ကိုမဆိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Litecoin ဟုသင်ထင်လျှင် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မကြာမီစျေးနှုန်းမြင့်တက်လာလိမ့်မည်၊ သင်သွားရန်လိုသည် ရှည်လျားသော အားဖြင့် ဝယ်ခြင်း ယုံကြည်စွာဖြင့်မှာယူပါ cryptocurrency ပွဲစား .
ငါတို့သည်လည်းအစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ - ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များသည်သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ထိုစကားနှင့်အတူပါ ၀ င်သောအရာကိုအနည်းငယ်အလင်းပြကြပါစို့။
သြဇာဖြင့် Litecoin CFD ၏ရိုးရှင်းသောဥပမာကိုကြည့်ပါ။
သင် LTC/AUD တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး ၁: ၂ ၏သြဇာကိုကမ်းလှမ်းသည်
ထိုမူလဒေါ်လာ ၈၀၀ အော်ဒါမှာယခုသင်ရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းမှဒေါ်လာ ၁,၆၀၀ သို့မြင့်တက်လာသည်
ထို့ကြောင့် ၁၂၈ ဒေါ်လာအမြတ်ထုတ်မည့်အစားမင်းရဲ့အမြတ်ကိုအထင်ကြီးစရာ ၂၅၆ ဒေါ်လာအထိမြှင့်တင်လိုက်သည်
မင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ မင်းရဲ့ Litecoin ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ဖို့မင်းကိုခွင့်ပြုတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် LTC/AUD သည်အခြားတစ်လမ်းမှထွက်သွားပြီးစျေးနှုန်းတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် တိုးမြှင့်လာသည်မင်းမင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှု ၂ ဆကိုမီးပုံးပျံခဲ့လိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်၊ အမြဲသတိရှိရှိအသုံးချပါ။
Litecoin ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
သဘာဝအားဖြင့်၊ သင် Litecoin ၀ ယ်မည့်နေရာကိုကြည့်ရန်စဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးများသောနည်းလမ်းအချို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Litecoin Debit Card ၀ ယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည်အွန်လိုင်း cryptocurrency ပလက်ဖောင်းများ၏ခြင်္သေ့၏ဝေစုကိုမင်းအား debit card ဖြင့် Litecoin ၀ ယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်အခကြေးငွေများသည်အလွန်နည်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်၍ ငွေလွှဲမှုတစ်ခုစီတွင် ၃% နှင့် ၄% ကြားငွေသွင်းသည်။
သိသိသာသာခြားနားချက်တွင် eToro သည်စင်မြင့်ပေါ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံး၍ ငွေသွင်းရန်မရွေးသော ၀ င်ငွေအနည်းငယ် ၀.၅%သာကောက်ခံလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ဒေါ်လာဖြင့်ပေးချေလျှင် Litecoin ကို debit card မှတဆင့်အခမဲ့ ၀ ယ်နိုင်သည်။
Litecoin Credit Card ၀ ယ်ပါ
အချို့သောပလက်ဖောင်းများသည်ခရက်ဒစ်ကဒ် သုံး၍ Litecoin ကို ၀ ယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သတိထားရမည့်အဓိကအရာသည်ငွေလွှဲပမာဏ၏ပုံမှန်အားဖြင့် ၃-၅% ခန့်ရှိသည်။
ထို့ပြင်အချို့ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည် crypto ၀ ယ်ရန်ဤအထူးနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သူတို့၏အဆုံးမှသင့်အားငွေတောင်းခံလိမ့်မည်။ USD ကိုမသုံးခြင်းအတွက်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သောအခကြေးငွေအပြင် eToro ရှိ credit card မှတဆင့် Litecoin ၀ ယ်ရန်သင်ဘာတစ်ခုမှပေးချေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Litecoin Paypal ကို ၀ ယ်ပါ
PayPal သည်အားလုံး၏အကျော်ကြားဆုံး e-wallets များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ဦး စားပေးငွေသွင်းနည်းလမ်းတစ်ခုဟုယူဆသည်။ ပွဲစားရာပေါင်းများစွာသည် crypto စျေးကွက်များသို့ ၀ င်ခွင့်ကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းလူများစွာသည်ဤငွေပေးချေမှုကိုလက်မခံပါ။
မင်းဒီငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုမြန်မြန်နဲ့အဆင်ပြေစေချင်သလား၊ ကော်မရှင်မလိုဘဲ eToro မှာ Litecoin ကို Litecoin မှာ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။
Litecoin ATM စက်များ
Crypto ATM စက်များသည်သုံးစွဲသူအားငွေသားထည့်ရန်လိုအပ်သည် သို့ Litecoin ၀ ယ်ရန်စက် ဖန်သားပြင်တွင်သင်၏ကမ်းလှမ်းမှုအတွက်ဒင်္ဂါးမည်မျှရရှိမည်ကဲ့သို့အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်များကိုပေးပါလိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုတွင်ပထမဆုံး Bitcoin ATM ပေါ်လာပြီးကတည်းကယခု ၁၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သူတို့ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်တွေ့နိုင်ပြီး၊ အချို့သည် BTC ဒင်္ဂါးများသာ ၀ ယ်နိုင်သော်လည်း LTC တွဲဖက်သုံးနိုင်သော terminal ရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ ဒါတွေကိုအမေရိကန်၊ ဗြိတိန်မှစပိန်၊ တောင်အာဖရိကအထိနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ရှေ့မသွားမီဤစက်များသည်ကြီးမားသောကော်မရှင်ကြေးများနှင့်လာသည်ကိုထောက်ပြသင့်သည်။ ထို့ကြောင့် eToro ကဲ့သို့ကော်မရှင်မပါသောပွဲစားမှတဆင့်သင်၏ ၀ ယ်ယူခြင်းသည်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
ရေရှည်သို့မဟုတ်ကာလတို Litecoin ပန်းတိုင်များပေါ် အခြေခံ၍ ရနိုင်သောကွဲပြားသောနည်းဗျူဟာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည်။
သို့သော်လည်းရှေ့သို့တိုး။ ခိုင်မာသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်သင်ထည့်နိုင်သောရိုးရှင်းသောစနစ်များစွာရှိသည်။ သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အောက်ပါအချက်အချို့ကိုကြည့်ပါ
ဒေါ်လာ - ကုန်ကျမှုပျမ်းမျှ
'ဒေါ်လာအစီအစဉ်' ဟုလူသိများသောဒေါ်လာကုန်ကျစရိတ်ပျမ်းမျှခြင်းတွင်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘတ်ဂျက်ကိုမှီဝဲခြင်းပါ ၀ င်သည်။
မင်းရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကိုစစ်ဆေးပြီးမင်းရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကောင့်ကိုလစဉ်ဒေါ်လာ ၄၀၀ နဲ့ဖြည့်ဖို့မင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏မဟာဗျူဟာအကြောင်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပြီးတစ်ပတ်လျှင် Litecoin တစ်ခု (သို့) လ၏ရက်စွဲတစ်ခုတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
ဥပမာ၊ တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၄၀၀ ဘတ်ဂျက်ဖြင့်ကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲတိုင်း LTC တိုကင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သို့မဟုတ်အင်္ဂါနှင့်သောကြာနေ့တိုင်းဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်စိတ်ကူးနိုင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည်လိုင်းပေါ်၌ငွေအများကြီးမချထားဘဲ၊ အရေးပါသော၊ Litecoin စုဆောင်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်နှေးကွေးသော်လည်းတည်ငြိမ်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Dip ဝယ်ပါ
မင်းရဲ့ Litecoin နည်းဗျူဟာကိုဒေါ်လာထည့်ခြင်းရဲ့ရိုးရှင်းမှုကိုကြိုက်ရင်မင်း dip ကို ၀ ယ်ချင်လည်းစမ်းချင်လိမ့်မယ်။ တကယ်တော့၊ နှစ်ခုလုံးကိုမင်းဆီရောက်တဲ့အခါနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
Litecoin သည်အလွန်နောက်ကျသောအချိန်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးတစ်ပတ်အတွင်း ၂၃% ကျဆင်းခဲ့သည်
ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်သို့ ဦး တည်သွားပြီး Litecoin ပေါ်တွင် ၀ ယ်ယူမှုကိုပြုလုပ်ပါ
ဒါကမှိုကို ၀ ယ်တာကိုဆိုလိုတာဘဲ
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်၎င်းသည်စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ၀ ယ်ယူပါ၊ စျေးနှုန်းများပြန်လည်မြင့်တက်လာသောအခါရောင်းချခြင်းဖြင့်အနာဂတ်၌အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
လမ်းညွှန်များတွင်ဤကဲ့သို့သောမျိုးစုံသုံးသော 'မျိုးစုံ' ဟူသောစကားလုံးကိုသင်မြင်ဖူးမည်မှာသေချာသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ - Litecoin တစ်ခုတည်းပိုင်ဆိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ အောင်မြင်မှုအပေါ်မှီခိုခြင်းသည်ပညာမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ မှန်းဆပိုင်ဆိုင်မှုကမင်းကိုအမြတ်ရစေနိုင်တယ် ယခုဒါပေမယ့်ဒီနယ်ပယ်မှာအရာအားလုံးဟာခဏအတွင်းမှာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ စတော့ညွှန်းကိန်းများကဲ့သို့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခု၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။
ကိစ္စအများစုတွင်သင်၏အစုစုရှိပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများအကြားခြားနားချက်ပိုရှိလေပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး သည်ဤမျှကြီးကြီးမားမားမလုပ်ပါကသင်၌မှီခိုရန်အမျိုးမျိုးသောကဏ္sectorsများစွာရှိနေသေးသည်။
Litecoin ၀ ယ်ဖို့ရှာတဲ့အခါမင်းမြင်ဖူးလိမ့်မယ် crypto အချက်ပြမှုများ ကြေငြာ? ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒါကစျေး ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကုန်သည်တွေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ။ ၎င်းကိုအလိုအလျောက်စက်ရုပ်များသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်များမှတဆင့်ရရှိသည်။
ဥပမာအားဖြင့် Learn2Trade တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လူကြိုက်များသည် Litecoin Trading အချက်ပြများ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတဆင့်ကမ်းလှမ်းသော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည် ကြေးနန်းအုပ်စုမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်ပြများသည်အိမ်၌ပြုလုပ်သောပြင်းထန်ပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏နောက်ဘက်သို့ပို့သည်။
ဒီမှာ၊ ငါတို့အလားအလာမြင်နေတဲ့ Litecoin အတွဲအပါအ ၀ င်အခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုငါတို့ကမင်းရဲ့အရှုံးနဲ့အမြတ်ကိုထည့်သွင်းမယ့်တန်ဖိုးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတယ်။ တစ်ပတ်လျှင်အချက် ၃ ချက်မလုံလောက်ပါကရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းပေးသော Premium account ကိုစမ်းသုံးကြည့်နိုင်သည်။ ဒါကမင်းကိုတစ်နေ့မှာ crypto အချက် ၃-၅ ချက်ရလိမ့်မယ်။
Litecoin အွန်လိုင်းမည်သို့ ၀ ယ်ယူနည်း
သင်သည် Litecoin ကိုပထမဆုံးအကြိမ် ၀ ယ်ရန်လမ်းညွှန်မှုအနည်းငယ်လိုအပ်လျှင်၊ အောက်ပါလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ ဤသို့ပြုလုပ်လျှင် Litecoin ကိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစား site Capital.com တွင်သင် ၀ ယ်နိုင်သည်
အဆင့် ၁: Litecoin ပွဲစားနှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
၁၀ မိနစ်ထက်မနည်းဘဲ Litecoin ကော်မရှင်ကိုအခမဲ့ ၀ ယ်နိုင်ပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ငါတို့သည် Capital.com ကိုသုံးနေသည်။
Capital.com တွင်ဆင်းသက်သောအခါ 'အကောင့်ဖန်တီးရန်' လင့်ခ်ကိုရှာဖွေပြီး လိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ။ ၎င်းတွင် သင့်အမည်၊ တည်နေရာ၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - သတ်မှတ်ချက်အချို့တင်ပါ
Capital.com အတွက်အမြန်ဆုံး ID သည်ပတ်စ်ပို့ဖြစ်သည်။ ဒါပြီးတာနဲ့မင်းလုပ်ရမှာကမင်းရဲ့လိပ်စာကိုအတည်ပြုဖို့မကြာသေးမီကအသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာ (သို့) ဘဏ်ရှင်းတမ်းတစ်ခုကိုမိတ္တူကူးပါ။
သင်ယခုစာရွက်စာတမ်းအပိုင်းကိုချန်ထားနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်နောက်မှငွေထုတ်ခြင်းကိုမလုပ်မီဤအရာကိုပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်။ အလိုအလျောက် ID အတည်ပြုခြင်းကြောင့်စာရွက်စာတမ်းအတည်ပြုခြင်းသည်မိနစ်ပိုင်းဘဲကြာသည်။
သင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ငွေသွင်းရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Capital.com တွင် debit/credit card, Paypal, Neteller နှင့် Skrill တို့မှရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏အကောင့်ထဲသို့ချက်ချင်းထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
အဆင့် ၄: Litecoin ကို ၀ ယ်ပါ
ယခုသင်ငွေများသွင်းပြီးပါကစာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးရှိ search box ထဲသို့ 'Litecoin' ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ထို့နောက်အထက်ပါကဲ့သို့အမိန့်စာတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၅ နှင့်ပြည့်မီရန်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Litecoin ကော်မရှင်မလိုဘဲ ၀ ယ်ဖို့ Set Order 'ကိုနှိပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုချိန်ဆပြီး Litecoin ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ကိုစဉ်းစားသောအခါ crypto မတည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုထက် ပို၍ အာရုံစိုက်စဉ်းစားပါ။
မျက်စိစုံမှိတ်သို့မဟုတ်နုံချာသော cryptocurrency စျေးကွက်သို့ဘယ်တော့မှမသွားပါနှင့်၊ ထို့ကြောင့်မင်း၌နည်းဗျူဟာတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုတန်းစီရှိနေကြောင်းသေချာပါစေ။ ထို့ပြင်သင်၏သုတေသနကိုလုပ်ပါ၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်ပွဲစားမှတဆင့် Litecoin တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်စိတ်ကူးကိုဖျော်ဖြေပါ။
Capital.com တွင်သင်သည် Litecoin ကိုလွယ်ကူစွာ ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီးကော်မရှင်အတွက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်သင် ၀ န်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ သင် debit/credit card (သို့) e-wallet ဖြင့်ငွေများကိုချက်ချင်းအပ်နှံနိုင်ပြီးအနိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်သာဖြစ်သည် $ 25!
သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သော Litecoin ၏အနည်းဆုံးပမာဏကဘယ်လောက်လဲ။
ပွဲစားနှစ်ယောက်ကတူတာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သော Litecoin ၏အနည်းဆုံးပမာဏသည်သင်မည်သည့် platform နှင့်သင် sign up လုပ်လဲပေါ်မူတည်သည်။ eToro သည် Litecoin ကိုအနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
၅ နှစ်အတွင်း Litecoin တန်ဖိုးမည်မျှဖြစ်နိုင်သနည်း။
အချို့ crypto လေ့လာသူများက Litecoin သည် ၅ နှစ်အတွင်းဒေါ်လာ ၆၅၀၀ တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းသည်။ သင်သည်ဤဖြစ်နိုင်ချေကိုမည်သို့စောင့်ကြည့်လိုလျှင်သင်သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အတွင်းအပြင်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဘဏ္financialာရေးအရင်းအမြစ်သစ်များပေါ်တွင်တဘ်များထားရှိရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Litecoin ၀ ယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကဘယ်မှာလဲ။
Litecoin ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာသည် eToro ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများသည်တင်းကျပ်သောပြန့်နှံ့မှု၊ ကွဲပြားသောစျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုးပေးပြီးကြီးကြီးမားမားထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည်မလုံလောက်ပါကပွဲစားသည် Litecoin ၀ ယ်ရန် ZERO ကော်မရှင်ကိုကောက်ခံသည်။
ငါ Litecoin ကိုဘယ်လိုရောင်းနိုင်လဲ။
Litecoin ကိုရောင်းရန်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းသည် eToro တွင်ရှိသည်။ သင်စျေး ၀ င်ရန် ၀ ယ်ယူမှုကိုသုံးခဲ့လျှင်ငွေထုတ်ရန်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုကိုရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်ပါ။ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ထဲသို့ငွေကိုထည့်ပြီးမင်းဆန္ဒရှိသလောက်ပြန်ထုတ်နိုင်သည်။
အချိန်အရုဏ်တက်ကတည်းကဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအထင်အမြင်လွဲမှုတစ်ခုသည် crypto အာကာသတွင်လျင်မြန်သောချမ်းသာကြွယ်ဝရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည်။ သို့သော်ဤစျေးကွက်သည်မတည်ငြိမ်သောကြောင့် Litecoin ရောင်းဝယ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်မရှိဘဲမလာပေ။ ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖန်တီးပါ၊ ဘတ်ဂျက်သတ်မှတ်ပါ၊ နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုသင်မလေ့လာမချင်းကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကို သုံး၍ စဉ်းစားပါ